Diyaarad siday Deeq Dawo ah oo soo gaartay Muqdisho - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Diyaarad siday Deeq Dawo ah oo soo gaartay Muqdisho
Diyaarad siday Deeq Dawo ah oo soo gaartay Muqdisho
Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa Maanta kasoo degtay diyaarad siday deeq dawo ah oo katimid Midowga Yurub,taas oo lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya.
Munaasabad kooban oo ka dhacday Garoonka Aadan-Cadde ayaa mas’uuliyiin ka tirsan Safaaradda Midowga Yurub ee Muqdisho waxaa ay deeqdaasi dawada ah ku wareejiyeen Xubno ka socday Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Deeqdaan dawada ah ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ka tahay gurmadka caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed ay ka heleyso caalamka gaar ahaan kuwo loogu talo galay ka hortagga COVID-19 IYO cuduro kale.
Xubnaha ka socday Wasaradda Caafimaadka xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa midowga Yurub waxaa ay uga mahad celiyeen deeqdaan dawada ah oo ay soo gaarsiiyeen,waxaana dhinaca kale Xubnaha Safaarada Midowga Yurub ee Muqdisho ay dhankooda sheegeen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan Soomalaiya.
Previous articleDowladda Qatar & OIC oo ka hadlay qaraxyo ka dhacay Muqdisho & Baydhabo
Next articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 05-07-2020